1. Imaski kufuneka ithe tye. Umda ongaphezulu kufuneka unxibe ngaphezulu kwebhulorho yeempumlo. Ungazinxibi kakhulu, okanye ziboshwe kakhulu, okanye ziphezulu kakhulu. Kwaye abantwana abanxibe iimaski banokuziva kunzima ukuphefumla, abazali bafanele banxibelelane ngokukhawuleza nabantwana babo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba nje ukuba imaski isususiwe, icala lomaski onxibe ngaphakathi komlomo kunye neempumlo kufuneka longelwe ngaphakathi kwaye libekwe kwisingxobo esicocekileyo okanye kwingxowa yeplastiki ecocekileyo ukuze isetyenziswe kamva. Amagunya ezempilo alumkise ukuba ukunxiba imaski ngokuchanekileyo kunokudlala indima, kodwa akuboneleli ngokhuseleko olupheleleyo kwizifo ezosulelayo, ngoko ke kufuneka kuthathwe ezinye amanyathelo okhuseleko, njengokuhlamba izandla rhoqo, ukugcina umgama kwizigulana nokuthintela iindawo apho abantu bahlanganisana khona.
2. Yiya kwindawo apho abantu bahlanganisene khona ukuba banxibe imaski. Akukho mfuneko yokuba abantu abaphilayo banxibe imaski ngalo lonke ixesha kubomi babo bemihla ngemihla. Nxiba imaski ukuthintela ukudibana kunye namaconsi aneentsholongwane ze-h1n1. Abantu abasempilweni kufuneka babekwe bodwa kumakhaya abo anyamekela abaguli abaneempawu ezinjengomkhuhlane, banxibelelane ngokusondeleyo nabantu abaneempawu ezibandayo, okanye baye ezibhedlele, kwizikhululo nakwezinye iindawo zikawonke-wonke ezinobuninzi baba bantu kunye nomngcipheko omkhulu wosulelo. Okanye ukuhamba kwiindawo apho ubhubhane mkhulu khona.
3. Imaski yokuhlawula yokulahla kufuneka ichithwe yonke imihla. Ukunxiba imaski akunakuthintela ngokupheleleyo ukwanda kwentsholongwane eluntwini. Abemi bayamenywa ukuba bathenge iimaski zoqhaqho ezikhemesti eziqhelekileyo. Yindlela enoqoqosho nefanelekileyo yokuthintela ukwazi ukusebenzisa indlela echanekileyo.
Iimaski ezisesikweni ezifanelekileyo ziyasebenza ekukhuseleni umkhuhlane. Ngelixa iimaski ze-gauze zingathintela iibhaktheriya, zinokuba nesiphumo esibi xa zinxibe ngokungafanelekanga.